Vokatry ny bleach | Nutri Diet
La eau de Javel Izy io dia mety ho vokatra iray izay misy trano marobe, na izany aza vitsy no mahalala ny fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamantsika. Ny iray amin'ireo maharatsy azy dia ny fofona mahery setra izay tsy mahery noho ny amoniaka.
Ny fofony dia mifandray avy hatrany amin'ny fahatsapana ny fahadiovana, na dia hitantsika aza ny vokatra vita amin'ny paoka mifangaro amin'ny zavatra hafa amin'ny faritra midadasika ka mihatsara ny fofony ary tsy dia mahafinaritra loatra.
Su olor Tsy io ihany no azontsika asongadina momba ny «bleach», ny fampiasana azy amin'ny doka avo dia mety hanimba ny fahasalamana, satria mampitombo ny mety hisian'ny aretin'ny taovam-pisefoana tsy mahazaka aretina io.
Voka-dratsy ateraky ny «bleach»
Ny iray amin'ireo fepetra dia ny fampihenana ny fampiasana azy, tsy maintsy zatra mampiasa azy io matetika isika. Rehefa mampiasa azy isika dia mila mitazona rivotra foana ny trano ary tokony hatao sarontava mihitsy aza.
Mba hisorohana azy tsy hiantra amin'ny hodintsika Ilaina ny mampiasa fonon-tànana na manasa tsara rehefa vita ny fampiasana ilay vokatra mba tsy hifandray amin'ny hoditra mandritra ny fotoana maharitra.
Raha mifoka klôro isika dia mety hisy vokany eo amintsika izany esophagus sy havokavoka.
El vinaingitra sy voasarimakirana Izy ireo dia mety ho mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny fitsaboana ny hoditra amin'ny hoditra.
Raha manana ny «bleach» pH lehibe kokoa noho ny 8 hampihena ny hoditsika io.
Nahita tamin'ny alàlan'ny fandinihana iray fa afaka manampy antsika hampihena ny fahatsapana ny tsy fahazakana sasany. Noho izany, tsy ny rehetra no maharatsy, fa mila mitandrina fotsiny isika amin'ny fatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Ny voka-dratsin'ny fanamainana